Fankalazanna ny iray volanan’ny mpampianatra FRAM
Fanolorana fifanarahana arak’asa tany Manampotsy
Notanterahina tao amin'ny Disitirikan’ny Manampotsy ny fizarana ny taratasy fifanarahana arak'asa tamin'ireo mpampianatra FRAM izay noraisina ho mpiasam-panjakana, sy ny fanjakana, alatsinainy 29 febroary 2016. Toy ny faritra rehetra manerana ny nosy dia nahazo ny anjarany ihany koa ny faritra Atsinanana amin'ireo Disitirika fito mandrafitra azy. Miisa 27 ireo mpampianatra FRAM notolorana ny fifanarahana arak’asa. Nisy ihany koa faomezana fitaovana toy ny vata fahita lavitrafahita 3, plaque solaire 6 miaraka aminy ireo kojakoja ary tablette 50 avy tamin'ny minisiteran’ ny fanambizam-pirenena.
Ny lanonana dia notarihin’ny solon-tenan'ny DRH avy any amin'ny minisiteran’ny fanabezam-pirenena, ny taleny faripiadidim-pampianarana Atsinanana Atoa SAMBANY Frederic sy ireo mpiaramiasa aminy ; notron’ireo manamahefana tany antoerana, ny solobavam-bahoka voafidy tany Atoa MAHARAMBY Jean Esp�rant, ny lehiben’ny Disitirika Atoa HERILAZA Jean Nuny, ny Ben'ny tanana AtoaRAZAFINDRAZAKA Felix.
Taorian’nyy lanonana fanolorana dia niroso taminy fanehona sy fizarana ampahibe maso ny lisitra ireo mpampianatra noraisina amin'ny andiany faha 3 ka natao ankarihary izany nafahana nametraka fanotaniana sy fanazavana feno hoan'ireo mpampianatra izay voakasika.
Hafaliana tsy homby tratra narahi-pisaorana no natolotr'izy ireo hoan'ny fitondram- panjakana sy ny minisiteran'ny fanambiazam-pirenena tarihi-ndriamatoa.
(118) Marcelline VAVIROA : 01-03-2016 - 11:15